Degmooyin badan oo aan waayeelka ku casuumin internet - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Birgit Bergkvist waxay internet ku haysataa degeenkeeda guryaha lagu xannaaneeyo waayeelka. Fotograf: Maja Lagercrantz/SR
Degmooyin badan oo aan waayeelka ku casuumin internet
La daabacay tisdag 2 januari kl 10.23
Degmooyin badan ayaan dadka waayeelka ah ee degen goobaha dadka da'da ah lagu hayo aan siinin adeega internet in kasta oo adeega internetka kor u qaadayo farxada noloshooda.
Birgit Bergkvist waa 95 jir, markii ay dooranaysay goobta ay degeyso, internetka ayaa ka mid ahaa wax yaabihii ay ku doortay.
-Aniga waxa uu internetku iiga dhignaa shuruud, inkasta oo aan la odhan karin waa shuruuda nololsha. Waxan haystaa Ipad aan wax kasta ka dhegeysto, waxa aan ka akhristaa wargeeysyadda. Waxaan soo amaanaaystaa buugaagta maktabadda.
Boqolkiiba 60 degmooyinka Sweden ayaa ku casuuma dadka waayeelka ah ee degen goobaha dadka waaweeyn lagu hayo adeega internetka. Inkasta oo weli ku dhawaad boqol degmo aanay ku casuumin waayeelka adeega internetka ayaa hadana waxa jira kor u kac ku imanaya arrintan. Sanandkii 2016 waxa adeegan lahaa 40 degmo.
Gunilla Brattberg oo dhowr buug ka qortay waayeelka iyo internetka ayaa laanta wararka ekot ee raadiyaha Sweden u sheegtay in ay jiraan
faa´iidooyin uu internetku u soo kordhinayo dadka degen goobaha waayeelka. Dadkan waxa u sahlanaanaysa in ay xidhiidh la lahaadaan ehelkooda. Brattberg waxa ay qabtaa in degmooyinka aan internetka ku casuumin dadka waayeelka ay tahay in ay hada hirgeliyaan arrintan.
-Tani waxa ay noqon doontaa arrin lagama maarmaan ah. Su´aashu waxay tahay goorma ayaa la bilaabayaa. Ma aha wax la odhan karo anaga ma hayno.
Birgit Bergkvist oo ka jawaabaysay su'aasha ah sidii ay dareemi lahayd haddii aanay heli lahyn internetka ayaa ku jawaabtay
-Waxaan dareemi lahaa qof xidhan oo kale. Xaqiiqdii, ahmiyad intaas le'eg ayuu internetku leeyahay.